အားကစားသတင်း Archives - Uptodate MM
အောင် လ အန် ဆန်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ မြန်မာဂုဏ်ဆောင် MMA Fighter တယောက် ဆိုတာကို လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ အောင်လအန်ဆန်ကတော့ အမြဲတမ်းလိုလို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ပွဲစဉ်တွေကို ထိုးသတ်ရလေ့ရှိပြီး အမြဲတမ်းလိုလိုလည်း တဖက်ပြိုင်ဖက်ကောင်းကို အနိုင်ယူ ထိုးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး […]
ခက်မိုက်မိုက်ဖိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ်တွေ့ရတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အောင်လအန်ဆန်း
By Uptodate MMPosted on May 18, 2019
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကလေးစားအားကျနေရတဲ့ မြန်မာ့ကိုယ်စားပြု One Championship (MMA) ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆန်းရဲ့အောင်မြင်မှုကို အားလုံးလည်း လေးစားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပွဲကောင်းများစွာကို ထိုးသတ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက လက်ဝှေ့သမားများစွာရဲ့ လေးစားမှုကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အောင်မြင်မှုများစွာကိုရရှိထားတဲ့ အောင်လအန်ဆန်းကတော့ လက်ရှိမိသားစုကို အချိန်ပေးအနားယူနေပြီး […]
အရန်ကစားသမား စာရင်းမှာတောင်ပါဝင်မလာတော့တဲ့ အောင်သူအခြေနေတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ကျော်ကိုကို
အောင်သူရဲ့ ကလပ်မူထောင်နဲ့ ကျော်ကိုကိုရဲ့ ကလပ် ဆာာမတ်ပရာကန်တို့ ကစားခဲ့တဲ့ ထိုင်းလိဂ်(၁)ပွဲစဉ် အပြီးမှာ ကျော်ကိုကိုက အောင်သူကိုသွားရောက်အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းလိဂ်(၁)ကလပ် မူထောင်အသင်းမှာ ပုံမှန်နေရာ ပျောက်ဆုံးနေပြီး ခြေစွမ်းပိုင်းကျဆင်းနေတဲ့ အောင်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆာမတ်ပရာကန်အသင်းမှာကစားနေတဲ့မြန်မာ့လက်ရွေးစင် တိုစစ်မှူး […]
WCW ရဲ့ နပမ်းသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ မက္ကစီကန်နပမ်းသမား Silver King (အမည်ရင်း Cuauhtémoc González Barrón) ဟာ လန်ဒန်မြို့မှာ စနေနေ့ညက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နပမ်းပွဲမှာ ပြိုင်ဘက်နဲ့အတူ ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ရင်း သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် […]
အရှေ့တီမောအသင်းကို ၂၆ဂိုးအထိ သွင်းပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာယူ-၁၅ အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်း
By Uptodate MMPosted on May 10, 2019
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ AFF U-15 Girls’s Championship 2019 ပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဖွင့် ပွဲစဉ်မှာ မြန်မာယူ-၁၅ အမျိုးသမီး အသင်းဟာ အရှေ့တီမောအသင်းကို (၂၆-၀) ဂိုး ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ ဂိုးပြတ်ခြေပြတ် […]
နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်ကြီးကို ပိုပြီး ကမ္ဘာကျော်အောင် ဗုတ်ပေးကြပါဦးနော်…
By Uptodate MMPosted on April 29, 2019
World MMA Awardsဆန်ခါတင်စာရင်းတွင် မစ်ဒယ်ဝိတ်နှင့် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်ပါဝင် ရန်ကုန် ဧပြီ ၂၇ ဘက်စုံကိုယ်ခံပညာသုံး MMA ကစား သမားများအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမား သည့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲဖြစ်သော Fighter Only မဂ္ဂဇင်းက […]
ဗီရာနဲ့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲကို မနီလာမြို့က ဖိလစ်ပိုင် ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှာ ထိုးသတ်ချင်လို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့အောင်လန်အန်ဆန်း
အောင်လန် အန်ဆန်း နဲ့ ဖီလစ်ပိုင် ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲကို အောက်တိုဘာလ 13 ရက် နေ့မှာ ၊ ဂျပန် နိုင်ငံမှာ ထိုးသတ်ဖို့ စီစဉ် ထားခဲ့တာပါ။ […]
အောင်လအတွက် စိတ်မပူကြပါနဲ့! စိန်ခေါ်တိုင်းထိုးမရ ဝိတ်တန်းညီမှ ထိုးသတ်ခွင့်ရမှာပါ…
အောင်လအတွက် စိတ်မပူကြပါနဲ့!!! ဝိတ်တန်းညီမှ ထိုးသတ်ခွင့်ရ! ကမ္ဘာ့လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ရွှေခါးပတ်ကာကွယ် ရန် စိန်ခေါ်သူ ဘရန်ဒန်ဗီရာ၏ တရားဝင်နုတ် ထွက်စကားကြောင့် မြန်မာပိုင်သွန် အောင်လအတွက် ပရိတ်သတ်တွေ ရတက်မအေးစိတ်ပူခဲ့ကြတယ်။ လက်ရှိမှာ စိန်ခေါ်သူ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား ဘရန်ဒန် […]
ဖစ်နိုင်ရင် ဒဏ်ရာတွေ မနက်ဖြန်မှာပဲပျောက်သွားချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကျော်မင်းဦး
ဖြစ်နိုင်ရင် ဒဏ်ရာတွေ မနက်ဖြန်မှာပဲပျောက်သွားချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကျော်မင်းဦး ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ပြီး ဘောလုံးလောကမှ အနားယူသွားပြီလို့ ပရိသတ်တွေ သိထားတဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် လူငယ်ကစားသမား ကျော်မင်းဦးကတော့ လက်ရှိချိန်မှာ သူ့အနေနဲ့ ဘောလုံးနဲ့ မြက်ခင်းပြင်ပေါ်ပြန်ပြီးတော့ ခြေချဖို့အတွက် လမ်းစလေးပေါ်လာပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး […]